Inona no maha samy hafa ny bisikileta fiarovan-doha sy ny mikorisa amin'ny fiarovan-doha? - Jomo Technology Co., Ltd
Ny mahazatra fanontaniana izay olona manontany hoe: "Inona no maha samy hafa ny bisikileta fiarovan-doha sy ny mikorisa amin'ny fiarovan-doha?" Ankoatra ny mazava maha samy hafa eo amin'ny tarehiny, bisikileta sy ny mikorisa amin'ny fiarovan-doha no tena functionally samy hafa amin'ny fomba maro, ka tianao ho azo antoka raha mividy ny tsara karazana fiarovan-doha ho an'ny mitaingina ny herinaratra skateboard .
Azonao atao ny mahita ny fahasamihafana eo amin'ny fandrakofam-baovao eo amin'ny bisikileta tsy tapaka fiarovan-doha, ary ny iray natao hiarovana ny indray ny lohanao. Image bola: The Sweethome
Iray lehibe samy hafa sy ny fiarovan-doha bisikileta mikorisa amin'ny fiarovan-doha dia tena mifandray ny teti-dratsy samihafa. Skate fiarovan-doha izay fomban-drazana manodidina sady mandimandina, hasarony ny ambadiky ny lohanao. Ny antony dia satria izy ireo dia natao mba hiarovana an'i riandrano izay skateboarders matetika maka, izay mba tany tao indray ny lohany. Mifanohitra amin'izany kosa, bikers mahalana vao latsaka ny indray ny bisikileta.
Fa ny herinaratra skateboarder aho dia mahazo fahazoan-dalana hidirana ny fiarovan-doha izay manarona ny indray ny lohany tahaka ny mikorisa amin'ny nentim-paharazana no fiarovan-doha. Satria ny birao dia manana ny fahafahana hanafainganana haingana, afaka hatsipy eny ary backwards raha hanameloka tena mampihatra throttle ianao.
Ny maha samy hafa ny lehibe hafa tsy tapaka mikorisa amin'ny fiarovan-doha sy fiarovan-doha ny bisikileta dia ny fahafahana miaro an'i karazana fiantraikany. Nentim-paharazana, tsy voamarina, mikorisa amin'ny fiarovan-doha Natao amin'ny sombin-javatra malefaka akora izay miaro manohitra maro fiantraikany kely. Mifanohitra amin'izany kosa, ny bisikileta fiarovan-doha Vita amin'ny EPS sombin-javatra mafy izay natao hitondra fiantraikany lehibe iray ka hivadika, araka izay tokony hisolo ny fiarovan-doha.
Na dia nentim-paharazana mikorisa amin'ny fiarovan-doha ara-dalàna natao ho an'ny skateboards sy Electric longboards , dia matetika no tsy tsara laza, dia tokony hahazo ny mikorisa amin'ny fiarovan-doha izay mampiasa izany sombin-javatra sarotra EPS bisikileta manana fiarovan-doha, dia mbola miaro ny ambadiky ny lohanao. Afaka milaza izay mora foana mikorisa amin'ny fiarovan-doha natao atỳ amin'ny fanaovana antoka izy ireo CPSC fanamarinana ara-panjakana.
Inona no fiarovan-doha tokony hividy?
Rehetra ny fiarovan-doha aho voatanisa ao amin'ny fiarovan-doha ny mpitari-dalana no CPSC voamarina ary natao hiarovana ny indray ny lohanao. Raha mbola ianao antoka manana fiarovan-doha voamarina fa miaro ny indray koa ny lohanao, dia ho azo antoka kokoa be eo amin'ny herinaratra skateboar e.
Post fotoana: Dec-11-2017